လက်​ခံ အသံထွက်​ (recieved pronunciation) ကိစ္စ – Kyaw Zaw Oo's Blog
March 19, 2022 March 20, 2022 web_master
လက်​ခံ အသံထွက်​ (recieved pronunciation) ကိစ္စ
ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်​စကားတွင်​ စံအသံထွက်​ ဟု ​ဆိုနိုင်​မည့် အသံထွက်​များကို rp (တနည်း) recieved pronunciation ဟု ​ခေါ်ကြပါသည်​။ ‘standard’ ‘စံ’ ဟူ၍ ​ခေါ်​ဝေါ်ခြင်းမပြုဘဲ ‘recieved’ ‘လက်​ခံ​သော’ ဟူ၍ သုံးနှုန်းခြင်းအားဖြင့် အဆိုပါ အသံထွက်​များနှင့်မတူ​သော အသံထွက်​များကို ‘စံလွဲ’ ဟု ဆိုလိုရာမ​ရောက်​​အောင်​ ​ရှောင်​ရှားကြပုံံရပါသည်​။
အင်္ဂလန်​​တောင်​ပိုင်း လန်​ဒန်​၊ ​အောက်​စဖို့ဒ်​ နှင့် ကင်းဘရစ်​မှ “​ခေတ်​ပညာတတ်​” များ၏ ​လေသံအား ပင်​မအဓိကထားလျက်​ rp ကို သတ်​မှတ်​ထား​ကြောင်​း​တွေ့ရပါသည်​။ oxford dictionary တွင်​ တည်​ပုဒ်​များ၏ အသံထွက်​ကို rp ဖြင့် ပြသည်​။
rp သတ်​မှတ်​ခြင်းအလုပ်​သည်​ အလွန်​ဝိဝါဒကွဲပြားလျက်​ အငြင်းပွားကြရသည့်ကိစ္စ အချိန်​ကြာ​ညောင်းသည့်ကိစ္စ တစ်​ခုဖြစ်​​လေသည်​။ မ​တော်​လျှင်​ အမုန်းပွားနိုင်​သည်​။
အင်္ဂလိပ်​က ရခိုင်​ပြည်​ကို မသိမ်းခင်​ကာလ စစ်​တ​ကောင်း​တောင်​တန်း​နေသူများနှင့် ရခိုင်​​မြောက်​ပိုင်း​နေသူများ စကား/​​​လေသံ သည်​ (အတူတူနီးကပါး) အလွန်​ဆင်​တူကြ​ကြောင်း မှတ်​တမ်းအချို့က ဆိုပါသည်​။ ​နောက်​ပိုင်းမှ (နှစ်​ရာချီကာလအတွင်း) စစ်​​တွေ/​မြောက်​ဦးလွင်​ပြင်​​နေသူများ၏ စကားသံများ ဗမာမှုပြု burmanized ပြုခံရပြီး ​လေသံများကွဲလာကြသည်​ ဟု မှတ်​ချက်​တစ်​ခုက ဆိုပါသည်​။
ရခိုင်​ rp ကိစ္စ နှင့် ပတ်​သက်​လာလျှင် သတိထားရန်​မှာ –
(၁) rp ကိုယ်​နှိုက်​သည်​ပင်​လျှင်​ accent (​လေသံကွဲ) တစ်​ခုဖြစ်​သည်​ ဆိုသည်​ကို ဘယ်​​သောအခါမှ မ​မေ့အပ်​။
(၂) ရခိုင်​ပင်​မ accent အုပ်​စုကြီးနှစ်​ခုတွင်​​ ရမ်းဗြဲ​လေသံအုပ်​စုသည်​ လူဦး​ရေပိုများသည်​၊ ရခိုင်​တပြည်​လုံး ပျံ့နှံ့လျက်​ရှိသည်​။ (ဥပမာ – ကျွန်​​တော့် အဖမျိုးကား ရမ်​းဗြဲ​လေသံအုပ်​စု ဖြစ်​သည်​။)
(၃) ​တောင်​သား၊ ရီကြိုင်​သား၊ မရမာ/​မော့ဂ်​ တို့ထံတွင်​ burmanized အလုပ်​မခံရ​သေးဘဲ သီးသီးခြားခြား သန့်စင်​ကျန်​နေရစ်သည့်ရခိုင်ဝေါဟာရများ ရှိ​နေသည်​။ (ထိုအုပ်​စုများထံက ​​သင်​ယူရမည်​မှာ အသံထွက်​က အဓိက မဟုတ်​​ချေ။ ဝေါဟာရ lexicon များက အသံထွက်​များထက်​ ပြန်​လည်​ သင်​ယူစရာ ကိစ္စ ဖြစ်​​လေသည်​)။
(၄) rp ကိစ္စသည်​ ဝိဝါဒအလွန်​များသည့်ကိစ္စဖြစ်​ရကား “သတ်​မှတ်​”ပစ်​လိုက်​ခြင်း ဆိုသည့် ချဉ်းကပ်​မှုထက်​ အပြန်​အလှန်​ “ယဉ်​ပါး” ​စေခြင်းဆိုသည့် ချဉ်းကပ်​မှုက ပိုညင်​သာပါသည်​။
(၅) ကျွန်ုပ်​တို့၏ ဉာဏ်​ အကန့်အသတ်​​ဖြင့် အလျင်​စလို ဆုံးဖြတ်​မှု မလုပ်​​လေ ​ကောင်း​လေဖြစ်​ပါသည်​။
ပူးတွဲပါ ဗီဒီယို – ရမ်းဗြဲ နတ်​​ကောက်​မ နန့် ​မြောက်​ဦးဘက်​က နတ်​​ကောက်​မ
Previous အယ်​လ်​ဘာကျွန်းက ဘီလူးကြီး
Next လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ကန်သတ်မှတ်ချက်အား ဘင်္ဂလာက ကြိုဆိုမှုအ​ပေါ် ရှုမြင်​ချက်​
Maung Pru says:
“Although the BBC does not, and never did, impose pronunciations of its own on English words, the myth of BBC English dies hard. It owed its birth no doubt to the era before the Second World War, when all announcers … spoke … Received Pronunciation.” (Miss G.M. Miller, BBC Pronunciation Unit preface to the BBC Pronouncing Dictionary of British Names, 1971)
Received Pronunciation, often abbreviated to RP, is an accent of spoken English. Unlike other UK accents, it’s identified not so much withaparticular region as withaparticular social group, although it has connections with the accent of Southern England. RP is associated with educated speakers and formal speech. It has connotations of prestige and authority, but also of privilege and arrogance. Some people even think that the name ‘Received Pronunciation’ isaproblem – if only some accents or pronunciations are ‘received’, then the implication is that others should be rejected or refused.When writing his pronouncing dictionary in 1916, phonetician Daniel Jones described RP as the accent “most usually heard in everyday speech in the families of Southern English persons whose menfolk have been educated at the great public boarding schools”. Although this description would raiseafew eyebrows today, RP is still the accent generally represented in dictionaries which give pronunciations, and it’s also used asamodel for the teaching of English asaforeign language. Perhaps for this reason, RP is often thought of as an unchanging accent;astandard against which other accents can be measured or judged. Some people don’t even think of it as an accent at all, but ratheraway of speaking without an accent. Speaking without an accent, though, would be like painting withoutacolour! In fact, there is considerable variation within groups of people who are said to speak RP, the term is differently interpreted by different people, and RP itself has changed considerably over time.
In my opinion, the tendency towards Posh English, and the import of other types of pronunciation from across the world, including, the Indian English, has made received pronunciation outdated and has been replaced by the major broadcasting houses.